उज्वल थापाले आफ्नाबारे यस्तो लेखेका थिए - Dainik Online Dainik Online
उज्वल थापाले आफ्नाबारे यस्तो लेखेका थिए
नमस्ते! मेरो नाम उज्वल हो। म नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधार्न नेपालीहरुलाई संगठित गर्दैछु र यसको लागि चाहिने नेतृत्वहरु बनाँउदैछु। हाम्रो देशको लागि मेरो दुरदर्शिता यहाँ पढ्नुहोस्। धन्यवाद!
यो रह्यो मरो छोटकरीमा कहानी। सारांशमा भन्नुपर्दा म एस्ट्रो फिजिक्स पढ्न अमेरिका गएको मान्छे, एक वेबसाइट बनाउने डिजाइनर (कलाकार)भएर फर्कें।
सन् २००३ को पहिलो दिनमै डिजिटल म्याक्स सलुसन्स (डिएमएस)भन्ने सूचना प्रविधिको एउटा सानो घरेलु उद्योग खोलेँ। मेरो विचारमा यस कम्पनीले देशको अर्थतन्त्रलाई खासै ठूलो योगदान पुर्याउन सकेको छैन तर नेपालमा सूचना प्रविधिको उद्योग स्थापना गर्न र फस्टाउन ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। सयौँ नेपाली युवाहरुलाई उनको पहिलो रोजगार दियो, जसले गर्दा पछि उद्यमी बनाउन पनि मद्दत गरेको छ। त्यसमाथि नेपालमा सूचना प्रविधिको उद्योग स्थापना गर्न र फस्टाउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। यसमा चाहिँ मलाई निकै गर्व छ। पछिल्लो समयमा गन्दा यस कम्पनीका भूतपूर्व कामदारहरुले २० वटाभन्दा बढी उस्तै काम गर्ने कम्पनीहरु खोलिसकेका छन्। सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ र धेरैसँग त सहकार्य समेत गरिरहेका छौँ।
२०११ मा “परिवर्तनको लागि हामी नेपाली एक” वा “नेपाल य़ुनाइट्स” भन्ने नागरिक अभियान स्थापना गर्न धकेल्यो। नेपाल युनाइट्सले समाजका विभिन्न नागरिक पेशावर अगुवाहरु र गैरराजनीतिक युवाहरुलाई एकै ठाउँमा लिएर आयो र देशको राजनीतिलाई हल्लायो। “ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ” भन्ने नारा बोकी खुब दबाब दिइयो। देश विदेश फैलियो यो आगो। राजनीति गर्नेहरुलाई धेरै दवाव पर्यो। तर एउटा कुरा सत्य रहेछ नेपालमा। जुनसुकै अभियान गरे पनि यो कुरा ध्रुव सत्य रहेछ। “जो पहिले थाक्छ, उसैले त्यो दौड हार्छ।” अफसोस१ हामी नै पहिले थाक्यौँ। आआफ्नो पेशा गर्दै आएका हामीलाई धेरै समयसम्म काम छोडेर एक हुन गाह्रो हुन्छ यसरी राजनीतिक पेशावरहरुसँग भिड्न। बाहिरबाट पोखरीमा फोहोर सफा गर्न शायद असम्भवै रहेछ भन्ने यसले मलाई छर्लङ्ग देखायो।
(उज्वल थापाको ब्लगबाट साभार)।